Anguilla dia nandefa ny fitsidihan'ny nosy Virtual tamin'ny “Experience Anguilla ao an-trano”
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Anguilla dia nandefa ny fitsidihan'ny nosy Virtual tamin'ny “Experience Anguilla ao an-trano”
Ny Anguilla Tourist Board (ATB) dia manangana sehatra an-tserasera vaovao manome ny mpitsidika ny fotoana hiaina ny tsara indrindra any Anguilla avy amin'ny fiononan'ny tranony ihany. Experienceo ny Anguilla ao an-trano dia rakipeo horonantsary sy feo manentana mampiseho ny tsara indrindra amin'ny nosy. Miaraka amin'ny horonan-tsary 20 sy ny playlist Spotify voafantina, ampirisihina ireo mpitsidika hanandrana, hianatra, hijery ary hihaino mba hitondrana tena any Anguilla. Experienceo ny Anguilla ao an-trano manolotra sehatra haino aman-jery isan-karazany amin'ireto sokajy manaraka ireto: Ny traikefa Anguilla, Sakafo sy zava-pisotro hatao, fisaintsainana sy antony manosika, mozika sy kolontsaina ary hihaona amin'ireo mponina ao an-toerana.
Experienceo ny Anguilla ao an-trano Ny votoatiny dia mizaha ny nosy isaky ny teboka, miaraka amina hetsika atolotra arakaraka ny fahalianan'ny tena, amin'ny fampiasana feed video mivantana, sary an-tsary sy fahitana ary feo hanintonana ireo mpijery ao Anguilla. Anisan'izany ny fitsangatsanganana an-tanety sy kayak, resipeo amin'ny cocktail avy any Elvis 'Beach Bar, resipeo ho an'ny Anguillian Johnny Cakes malaza, kilasy yoga vinyasa 20 minitra ao amin'ny Mead's Bay Beach izay tarihin'ilay mpampianatra yoga malaza Sammi Green, cam live stream, mozika avy amin'ny The Mighty Springer, sy ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mponina toy ny tompon'ny Johnno's ao Sandy Ground, momba ny fomba nanjary nalaza ny barany.
Manome fomba fijery vaovao ho an'ny mpandeha ny sehatra vaovao amin'ny toerana malaza sy ny hetsika manerana ny nosy, mamela ny toerana hanokafana ny varavarany ho an'izao tontolo izao, na dia mihidy vonjimaika aza ny sisintany.
"Voafetra ny dia noho ny COVID-19, faly izahay manolotra traikefa virtoaly an'ny nosy malalantsika," hoy i Shellya Webster, mpitantana ATB, Raharaham-bahiny. "Ny fikarohana dia mampiseho fa ny olona dia lasa" mpandeha amin'ny seza ", te hitsidika toerana itodiana izy ireo ary Experienceo ny Anguilla ao an-trano manolotra fomba tokana ahafahan'ny olona milentika ao amin'ny nosintsika.
Manantena izahay fa ireo mpitsangatsangana dia hahita fitsaharana ilaina, fialan-tsasatra ary fifaliana amin'ny sehatra vaovao - izay tena manintona ireo mitady fialan-tsasatra tonga lafatra mankany Anguilla. miaraka Experienceo ny Anguilla ao an-trano, manentana azy ireo izahay mba tsy hieritreritra fotsiny fa hanomana ny fandosiran'izy ireo any Anguilla, raha vantany vao vonona izy ireo ary afaka mivezivezy indray amin'ny ho avy tsy ho ela ”.
Anguilla vao haingana no laharana faha-efatra nisesy nisesy, laharana 1 amin'ny Travel + fialam-boly 2020 loka tsara indrindra eran-tany lisitry ny Nosy Lehibe any Karaiba, Bermuda, ary Bahamas. Ny mpamaky dia nanome isa ireo nosy amin'ireto toetra manaraka ireto: Manintona / morontsiraka, hetsika / fitsangatsanganana, trano fisakafoanana / sakafo, olona / finamanana, lanja. Anguilla koa dia nitana ny laharana faha-7 amin'ny nosy 25 Top eran'izao tontolo izao, ilay nosy Karaiba tokana nahavita an'io lisitra io, ary ny # 2 no nosy 25 Top Romantic Most of the World.
Raha hitsidika an'i Anguilla amin'ny alàlan'ny 'Experience Anguilla At Home' dia tsidiho fotsiny ivisitanguilla.com/experiences
Natsipy tany amin'ny faritra avaratr'i Karaiba, Anguilla dia hatsarana saro-kenatra miaraka amin'ny tsiky mafana. Ny halavan'ny vatohara sy vatosokay lava manify feno ravina maitso, feno morontsiraka 33 ny nosy, heverin'ny mpitsangatsangana mahay sy ny gazety mpizahatany ambony indrindra ho tsara indrindra eto an-tany. Sehatra mahandro sakafo mahaliana, karazana trano isan-karazany sy kalitao isan-karazany, isa manintona ary kalandrie fety mampientanentana no mahatonga an'i Anguilla ho toerana mahasarika sy miditra.
Ny UN sy ny ICAO dia manampy ny ekipa fiaramanidina fiaramanidina hiady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko
Tongasoa i Tobago amin'ny fiverenanao: mamporisika ny fizahan-tany any an-toerana ny TTAL